Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 36
Copyright, 1912, avy amin'ny HW PERCIVAL.
Nahoana ny voromahery no nampiasaina ho tandindon'ny firenena samihafa?
Angamba ny antony manosika maro no nanosika ny fakana ilay voromahery ho mariky ny firenen-tsamihafa maro. Na izany aza dia azo eritreretina fa nalaina izany satria maneho tsara ny toetra sy ny politika, ny faniriana ho filamatra, ny filamatra ho an'ny firenen'ireo izay nitazona azy ho fenitra.
Mpanjakan'ny vorona sy ny habakabaka ny voromahery, satria ny liona dia lazaina fa tsara fanahy eo amin'ny biby. Ny vorona mpihaza, fa koa fandresena. Izy io dia vorona tsy manam-paharetana ary afaka sidina haingana ary lava. Mihazakazaka haingana amin'ny rembiny izy, dia miakatra haingana ary mirehareha amin'ny halehiben'ny toerana avo.
Ny firenena iray dia maniry hery, faharetana, herim-po, haingam-pandeha, fanapahana, fahefana. Ny voromahery dia manana ny haavony rehetra. Ara-dalàna raha heverin'ny sasany fa ireto no antony nahatonga ny firenena na ny foko na ny mpitondra hanaiky ny voromahery ho toy ny feniny. Ny tena izy dia tandindon'ny firenena mandresy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, ary indrindra ireo izay mitondra ady lavitra be.
Ireo no mampiavaka ny voromahery. Fa ny firenena izay mandray an'io vorona io ho tandindony, mazàna mahafeno ny toetrany na fikasany manokana na amin'ny teny filamatra miaraka amin'ny voromahery na amin'ny alàlan'ny fametahana sary an-tsehatra amin'ny tendron'ny voromahery na amin'ny vavany, toy ny sampana, zana-tsipìka, saina, ampinga, tehim-pahefana, tselatra, ny tsirairay amin'izy ireo irery na miaraka amina marika hafa dia maneho ny toetran'ny firenena na ny toetra tian'ny firenena sy ny tanjony.
Izany rehetra izany dia avy amin'ny fomba fiasa azo ampiharina sy ara-nofo. Misy sary an'ohatra iray hafa momba ny voromahery izay ahitana ny toetrany mitovy amin'ny fomba fijery ara-panahy kokoa.
Iray amin'ireo "efitrano velona" voalaza ao amin'ny Apokalipsy izay voalaza fa hijoro manodidina ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Napetraka amin'ny famantarana Scorpio an'ny Zodiaka ny voromahery. Manambara ny hery ara-panahy amin'ny olombelona izany. Ny voromahery dia hery mahery vaika sy ara-panahy ao amin'ny olombelona izay mety hiafara amin'ny avo indrindra. Ilay firenena na olona maka ny voromahery ho mariky ny heviny ara-panahy dia mikendry ny hahatongavana amin'ny fomba ara-panahy izay rehetra asehon'ny voromahery amin'ny maha-tandindona azy. Mikendry ny handresy izay rehetra eo ambany izy ary mampiasa ny heriny hampiakatra amin'ny sehatra avo kokoa. Amin'ny alàlan'ny fitarihany io hery asehon'ny voromahery io no mpandresy ny faniriany, ny fanjakazakana ao amin'ny faritra amin'ny vatany izay hiakarany ary, tahaka ny voromahery, mametraka ny tranony any an-tendrombohitra avo any an-tampon'ny havoakan'i servra. Ka nitsangana avy amin'ny famantarana Scorpio izy, izay faran'ny faran'ny ambany hazondamosina, hatrany an-tampony, izay miditra ao anaty loha.
Moa ve ny voromahery mitongilana ankehitriny izay ampiasaina ho dika nasionalin'ny firenena sasany, izay hita ao amin'ireo tsangambaton'ny Hétites fahiny tamin'ny andron'ny Baiboly, dia manaiky ny toe-piainana andrinjinan'ny olombelona?
Rehefa ampiasaina ho mariky ny firenena ny voromahery roa, dia indraindray ilazana zavatra hafa tiana holazaina, fa ny firenena na firenena roa dia tafaray ho iray, na dia mety hisy loha roa ao amin'ny governemanta. Raha tsy misy tandindona hafa miaraka amin'ny voromahery roa loha eo amin'ny tsangambanan'ny Hetita taloha, dia tsy manondro lehilahy androgynous io famantarana io. Andogynous lehilahy na lehilahy roa samy nanambady, tsy maintsy misy fiasa roa, hery roa mifanohitra amin'ny natiora mifanohitra. Ny elatra roa loha dia mitovy amin'ny natiora, satria samy manana voromahery ny loha roa. Ho an'ny lehilahy androgynous dia asehon'ny voromahery, ny voromahery dia tokony hiaraka na mifandray amin'ny liona, izay, na dia any amin'ny faritra hafa aza, dia maneho ny elatry ny vorona eo amin'ny vorona. Ny Rosicrucien taloha dia niresaka ny momba ny "Ny ra amin'ny Liona Mena," izay nahatonga azy ireo hanana ireo faniriana, na biby natoraly olona. Izy ireo koa dia niresaka momba ny "The Gluten of the Eagle White," izay ilazan'izy ireo ny hery ara-panahy amin'ny olona. Ireo roa ireo, ny ran'ny liona mena ary ny glutenan'ny voromahery, hoy izy ireo, dia tokony hihaona sy hankalaza ary hanambady ary avy amin'ny firaisany no hamorona hery lehibe kokoa. Tahaka ny fandrika tsy misy na inona na inona izy io raha tsy takatra ny heviny. Rehefa eo izany dia ho takatra fa takatra bebe kokoa momba ny fizika ara-batana noho ny nomena azy ireo trosa.
Ny ran'ny liona mena dia ilay faniriana mavitrika izay mitoetra ao amin'ny ràn'ny vatana. Ny glutenon'ny voromahery fotsy dia ao amin'ny lafiny voalohany amin'ny lymph amin'ny vatana. Miditra ao am-po ny lymph ary mampiray miaraka aminny ra. Avy amin'ity firaisana ity no misy hery hafa izay manosika ny taranaka. Raha ankasitrahana io fihetsehana io, hoy ny Alchemist, dia ho lasa malemy ilay liona ary ho very ny hery hiarina. Raha toa kosa ny glutenan'ny voromahery sy ny ran'ny liona mena dia tokony hiara-miombona raha tsy manome làlana ilay ody, dia ho lasa matanjaka ilay liona ary mahery ny voromahery, ary ny hery vao teraka avy amin'ny nanombohan'izy ireo dia hanome tanora amin'ny vatana sy hery amin'ny saina.
Ireo roa ireo, ny liona sy voromahery, dia maneho ny fitsipika roa, ny masculine sy ny vehivavy amin'ny lehilahy amin'ny lafiny ara-tsaina. Ny androgyne dia iray izay manana toetra sy fiasa sy lahy na vavy. Ny liona sy voromahery, ny rà ary ny lymph, miombona ao amin'ny vatana iray ihany ary manatanteraka ny asany mba hiteraka hery vaovao ao anatin'io vatana io ary tsy manome làlana ny fanamafisana ivelany, mamorona hery ara-batana vaovao izay nateraka zava-baovao izay, toa ny voromahery, no mety hisondronany avy amin'ny tany ary hiakatra ho any amin'ny tany avo kokoa.